> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka LG waa weyn
I CAAWI! Ma u baahan tahay inuu ka soo kabsado photos tirtiray telefoonka LG waa weyn!
Waxaan leeyahay kaadhka xusuusta SD 4GB Micro on my phone LG waa weyn oo uu had iyo jeer ka buuxsamay, alaabtii.
Recently, waxaan tirtiray dhammaan faylasha in kaadhka xusuusta aan istareexa markii iyagii dibadda u soo kala sooca, nasiib darro. Maxaa la sameeyaa?
Sidee inuu ka soo kabsado iyaga oo dhan?
Marka ay tani dhacdo, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in si fiican aad telefoon ama kaadhka xusuusta. Jooji la isticmaalayo si loo badbaadiyo files cusub. Taasi waa mid aad u muhiim ah. Xogta overwrtiting jir kasta oo files cusub 'tirtiri kartaa faylasha hore, iyo mar ay overwritten, ma jirto fursad kuwo dib. Sidaa darteed, ilaalin telefoonka sidoo shil ka dib.
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka LG waa weyn
Bareebka shaqeeyo waxaad u baahan tahay in la sameeyo, waayo, soo kabashada sawir LG waa weyn,
2. Download LG waa weyn oo soo kabashada sawir qalab: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac
Qalabka software kor ku Labaduba waa lagu kalsoonaan karo oo waxtar leh. Oo iyaga waxaa la soo kabsado dhan videos, sawiro tirtiray iyo formatted iyo music ka kaadhka xusuusta phone LG waa weyn oo aan khasaaro tayada wax. Ka sokow, ay taageeraan dib u soo kabashada ee telefoonada gacanta kale LG. Xalka dhan waxaad qaadataa oo keliya dhowr daqiiqadood. Next, aynu wada isku day version Windows ah.
Step1. Orod barnaamijka LG waa weyn oo soo kabashada sawir
Ka hor inta socda barnaamijka, xiriiriyaan phone in kombiyuutarka la cable ee digital aad diyaarisay, ama xirmaan kaadhka xusuusta la aqriyaha kaarka. Dooro sida ugu haboon adiga. Markaas ordi barnaamijka oo guji "Start" in la sii wado kabashada sawir LG lacag jaban.
Step2. Sawirka photos tirtiray aad LG waa weyn
Dooro kaarka telefoonka ama xusuusta iyo guji "Scan" si aad u hesho sawiro tirtiray waxa on.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawirada tirtiray ka LG waa weyn
Marka sawirka dhameystiray, aad sabab u scan soo socda heli doonaa. Halkan waxa aad ka mid mid ku eegaan karo photos recoverable. Markaas calaamadee kuwa aad rabto oo wada badbaadin on your computer adigoo gujinaya "Ladnaansho".
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad LG lacag jaban ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.